Kusoo Dhowaada Qisadii Jaceyl Ee Dhexmartay Dalal Iyo Bilan Qeybtii 2aad Ka Bogosho Wacan!! | Filimside.net
Home » Taariikhaha » Kusoo Dhowaada Qisadii Jaceyl Ee Dhexmartay Dalal Iyo Bilan Qeybtii 2aad Ka Bogosho Wacan!!
Sheekada Qeybtii Koowaad waxay inoo mareysay Dalal Iyo Bilan oo balameen waliba ku balameen in Dalal Iyo saaxiibadeesa imaan doonan xaafada Bilan si ay uwada cayaaraan hadaba halkeedi ayaan kasii amba qaadena.
Inkastoo Bilan tirsaneysay meel ka dhac misana markuu xaal siiyey haasaawihiisiina u bogtay oo uga dhadhantay inuu aad uga xun yahay falkiisii, garyigilna yahay, raalli bey noqotay. Markaas iyadoo xiiso leysu qabo ayuu Dalalna geeliisii aaday, iyana arigeedii oo ka yare durkay ka daba tagtay. Nasiib darro markay arigii u tagtay waxay la kulantay arigii oo dawacooyin labo neef ka bakhtiisteen.
Aalaaba sida dhacda reer miyigu aad bey u qiimeeyaan xoolahooda nool, qofka beylihiyana sida Bilan ku dhacday, waa la dilaa, ama waa la canaantaa, kolleyba tallaabo ciqaabeed ayaa laga qaadaa.
Sidaas darteed, markey arigii guryo geysay oo warkii la helay in dawaco arigii wax ka cuntay baa hooyadeed Cawo Nuur canaan kulul dusha uga tuurtay, oo waxay ku tiri, “Naayaa, xaalkaaga waa la socdaa, mee arigii lagu raaciyey? Mise beryahan dambe shafkaaga buuxsamay baa kuu been sheegay, oo haasaawe iyo qooq baad meherad ka dhigatay?” Iyadoo sii wadda bey haddana tiri, “Wallaadan reerka caawa iigu soo hoyaneyn, haahey! Waadigii is dhudhuganaayey baryahan lagu fasax.”
Bilan waa ka naxday hadalkii hooyadeed haasaawaheeda wax kaga sheegtay, waxayna danniday dhagar qabe dhulkow dhaqdhaqaaqee, iney si uun laacdankeedii maanta wax ka tuhuntay.
Canaantaas keliya loogagama harine intey hooyadeed labo ulood ku dhifatay ayey weliba kaga dhaaratay ineyan caawa guriga u soo hoyanin. Inkastoo aabbaheed isku dayey inuu dhexdhexaadiyo, hooyadii oo qof kulul u dhalatay, ayaa ku adkaatay ra’yigeedii.
Sidaasey Bilan iyadoo dhowr qaarood qabta guriga duleedkiisa ugu hoyatay habeenkii. Inkastoo dhaxan qaboobi jirtay isla markaasna baahiyi heysay oon waxba la siin, haddana ma dareemin, maxaa yeelay waxay ku dheeraatay feker ah, Maxaaba laguugu dilayaa hadba neef dawaco cuntay, waad hano qaadday, gurina waad yeelan kartaaye, maad tashatid? Fekeraddaas aad bey ugu guuxday, waxayna gashay sidey dhallintey taqaan oo gayaankeeda ah xul uga samayn lahayd, marna waxayba isku tiri, Haddaad cidba weydo sidii hablihii hore sameyn jireen yeel oo meel kale isaga heeran.
Haddana markey ka sii fekertay, taasi waxay ugu muuqatay gabadha heerantaa iney tahay mid intey guur wayday iney gumeysowdo ka baqeysa, walise aanay iyadu heerkaas gaarin arrinteedu tahay is afgaranwaa waalid oo keliya.
Markaas, fekerkaas dambe waxay uga gudubtay iney indha-indheyso dhallintii beelaha. Inkastey is diidsiineysana waxaa hadba la hor keenaayey Dalal, oy cid isugu dambeeyeen, marbase waxay soo xusuusaneysay inuuba isagu leeyahay sababta lagu ciqaabay, waxayna isku tiri, Kaasi inaad haaraanto mooyee xulka ma geli karo. Waxaase dhacday si kasta oy isu diidsiiso inuu Dalal noqday kan marna maankeeda ka bixi waayey. Sababtoo ah, waxaa weeyey inanka keliya oo indhoweyd haasaawe dhexmaray, oy laacdankiisii iyo leg isku qabashadoodii ka dareentay shucuurta islahaanshaha dheddigga iyo laboodka, aragtideedna, Dalal qurux rag lagu tilmaamo waa u dhammeyd, oo intuu dherer fiican oo buuxa oo garbarog leh u dhashay, ayuu wuxuu ku darsaday heybad uu dheddiga ku soo jiito.
Siduu ballanku ahaa Bilan habeenkii labaad oo dhan waxay dhegeysaneysay bal in Dalal iyo dhallintiisii soo ciyaar gudeen. Nasiib darro wax sacab iyo sanqar ah waa maqli weydey, waxaana ku dhacday niyad jab ay u qaadatay in Dalal ballantii uu isagu soo jeediyey kaga baxay.
Hase ahaatee, habeen afaraadkii ayey luuq sacab ka maqashay meel aan reerka ka fogeyn, halkaasey iyada iyo gabar kale leysu raacay boodadii sacabka. Dhallintii waa ku farxeen markey arkeen hablaha u soo baxay, khaas ahaan Dalal oo werwer ka qabay inaanu cid heleyn.
In yar haddii la kaftamay oo hadal soo dhoweyn ah leysku tuurtuuray ayaa sacabkii bilaabmay, markii jaanta leysla helayna waxaa heesay Dalal oo yiri:
“Hoobey, farasku waa higgoodaa,
Hoobey, xakamuhuu ku higga gooyaa.
Hoobey, kooruhuu ku himbilayoodaa.
Hoobey, raggu waa higgoodaa
Hoobey, warankuu ku higga gooyaa.
Hoobey, sumucuu ku himbilayoodaa
Hoobey, anna waa higgoodaa
Hoobey, sacabbaan ku higga gooyaa
Hoobey, Bilan baan ku himbilayoodaa.”
Bilan baa markaas heestii qaadatoo tiri:
“Hoobey, geelu waa higgoodaa
Hoobey, biyuhuu ku higga gooyaa
Hoobey, darantuu ku himbilayoodaa
Hoobey, dumarku waa higgodaa
Hoobey, qabyaduu ku higga gooyaa
Hoobey, dadabtuu ku himbilayoodaa.”
Goortey intaas is dhaafsadeen, ayaa waxaa beddelay heestii labo kale. Dalal iyo Bilanna intey gacanta is qabsadeen bay meel yar ka durugsan goobtii fariisteen, halkaasoo Dalal jirjirka u jiifsaday, Bilanna agtiisa jilbaha mid soo dhigtay. Haddii in yar dayaxa buuxay leysku daawanaayey, daalkii dartiisna la neef guray, ayuu intuu Dalal ku soo yare durkay gacanta qabtay oo ku yiri, “Yaa! Oo illeyn gacmaha xaad baad ku leedahay.”
Waxay ku tiri, “Dalal ma bahalnimadaadii baad weli waddaa?”
“Maya e miyaan lagu gacan qaadi karin, haddaan dhowr beri kala maqneyn? Miyeynaanse is cafiyin?”
Intey madaxa ruxday bey tiri, “Cafi ma sheegteen haddaad og tahay sidaan kuu eersaday maalintii dhoweyd.”
“Waxaa dhacay Dalalow, wax baas iyo waxaan eeday, oo maalintii dhoweyd intaan legdameyney baa arigii aan la joogey labo neef dawaco ka cuntay. Sababtaas darteed, baa habeenkii hooyadey intey i dishey gurigii iiga dhaaratay inaan u soo hoydo. Arrintaas aabbahay raalli kama ahayn, oo si lixaad leh ayuu isu hortaagey, waxaase ku adkaatay hooyadey oy teedii noqotay. Sidaasaana habeenkii oo dhan dhaxantii jirtey iyadoo weliba qadoodi ii dheer yahay, aan guriga dulfeedkiisii yuururay. Miyaanan ku eersan? Teeda kale hadda reerkii oo dhan waa isu dudeynaa, habeenkiina si aanan weligey u fekerin ayaan wax walba uga fekeray, adduunka iyo aayahayga nololeedka.”
“Maxaad ku fekertay waaba arrin cusube?”
“Wixii gabar hana qaadday ku fekeri lahayd baan ku fekeraayey iyo inaan reerkeyga ka tashi baxo. Hadda ogow Dalalow mar walba waa kaa ley horkeenaayey.”
“Bilaney ma ogtahay inaan adigana qaan kuu raacaayo, taasoo ah bal taabo meeshii qorigii dhinaca iga muday, labo beri baan jiifay, welina waa i xannuunayaa, sidaas darteed baan ballantii habeen labaadkii uga baaqday.”
Kolkaasey intey ku soo durugtay tiri, “Alla! Ma saasaa? Bal i tus aan eegee.”
Markaasuu dhabarka u soo leexshay, halkaasoo ay gacanta taabsiisay bartii qorigu ka muday, waxayna tiri, “Weli ma ku xanuunsaneysaa?” iyadoo gacantey ku heysay ugu dartay afka oo dabeyl qabow uga afuufeyso!
Isagoo ku sii raaxeysanaaya neecawda qabow ee afkeeda ka soo baxeysa iyo taabashadeed ayuu ku yiri, “Taabashadaada raxmaddeeda ayuun buu u baahnaa nabarku.”
Waxay tiri, “Horta af ku malable baa tahay, intaas keliya hadduu u baahnaa inuu ku bogsado, waa kuugu fillahay hagar la’aan.”
“Haahey, anna af ku malable dawliye ii daa, adna shinnidii hadba ubax dillaacay midda ka soo ururineysay baad tahay, wadajirkoodaana malab ku abuurmaa, aniga iyo adigana malaha ma ogide is hanashadeennaa macaanka iyo raaxada nololeed ku dhammeysmi kartaa. Waxaana fiicned in Bilan Hagarla’ laguu bixiyo.”
Inta hadalkiisii qalbigeedii toban baac hoos ugu degey oy sidii xishood galay gorodda hoos u rogtay bey tiri, “Dalalow gacaliye! Waxaan ku fiicanahay iyo waxaan noloshaada ugu fillahayba waa ii haysaa, ee hays gabin.”
Intuu labo saddex jeer qoslay buu yiri, “Sheekadii aan ku noqonnee, maxaad ku tashatay habeenkii dhoweyd?”
“Hadalku waa sarbeeban yahay, xaggee kaa dhaafay, ma su’aal beyse leedahay gabar tiri, inaan reerkeygii ka talo baxaan rabaa, Dalal intaas ma garatay, mise talo wax boob baad ka taqaan?”
Isagoo qoomameynaaya su’aashiisii ay ku yare qalloocisay buu yiri, “Waa hadal wanaagsan, waan ku afgartaye goormaan ballannaa aan arrintaad sheegtay, xiisey leedahaye, halkii ka sii wadnee? Ma ka dhigannaa sadex maalmood kaddib, berrito waa Salaase e, maalinta Jimcaha?”
“Waxba kama qabo, xagga galbeed ayaan ariga u soo daaq geynayaaye, sidaas ha inoo ahaato.”
Goortey intaas tiri, baa waxa isa soo dultaagay Cali Dalmar oy Dalal wada socdeen, wuxuuna ku yiri, “Gabarta maxaad ku daldaleysaa?”
Wuxuu ugu jawaabey, “Faduuli baad tahay, maxaa kaa galay waxaan ku daldalaayo?”
Goortii intaas leys yiri, ayuu Dalal Bilan intuu gacanta qabtay, xaggii guriga u dhaqaajey isagoo aad mooddid inuu Cali ka shaxeexaayo inuu la qabsado, in yar kaddibna rugteedii ayuu ku hubsaday.
Qalinkii Faarax Maxamed Jaamac Cawl Faarax Cadde.
Qybtii 1aad Hadaadan Aqrisa Fadlan Riix Halkaan
Waxaa Aqrisay 632